China 2021 fivarotana mafana fivarotana any ivelany Whirlpool dobo filomanosana dobo fandroana spa orinasa sy mpamatsy | Belle
2021 fivarotana mafana amin'ny toeram-pisakafoanana any ivelany Whirlpool lomano lomano dobo fandroana Spa
Quantity (Sets) 1 - 50 > 50
Logo namboarina (Min. Order: 2 Pieces)
Fonosana namboarina (Min. Order: 2 Pieces)
Fanamboarana sary (Min. Order: 2 Pieces)
Warranty: 3 taona, 5 taona Fitaovam-piadiana: tsy misy
Serivisy aorian'ny fivarotana: Fanohanana ara-teknika an-tserasera, fametrahana eo an-toerana, fanofanana eo an-toerana, fanaraha-maso eo an-toerana, kojakoja malalaka Style: tokana
Fahafahana vahaolana amin'ny tetikasa: famolavolana sary, vahaolana feno ho an'ny tetikasa, Fanamafisana ny sokajy Cross Toerana niandohana: Anhui, Sina
Anaran'ny marika: OEM Model Model: BS001228
Function: fanorana Fametrahana karazana: tokana
Drain Toerana: ahitsy Karazana fanorana: Combo Massage (Air & Whirlpool)
Loko: Namboarina Anaran'ny vokatra: fivarotana mafana lomano filomanosana any an-tokotany Spa
Habe: 2000 * 1600 * 900mm Endrika: Retangle
Karazana: Mitete-in Fampiharana: Tubo ivelany
Anarana: Spa-milomano any anaty rano any ivelany Fitaovana: acrylic
Fomba fanaraha-maso: Fanaraha-maso ny solosaina
1000 Piece / Pieces isam-bolana fivarotana mafana Whirlpool lomano lomano dobo filomanosana spa
Fandroana spa misy fonony
Mitondrà traikefa spa tonga lafatra. Ny fanorana spa dia tsy vitan'ny fanamaivanana ny havizanana sy ny fanaintainana, fa mampihena ny vatana sy ny saina iray manontolo.
Ny vokatra fitehirizana ny hafanana dia tena tsara. Na dia amin'ny ririnina mangatsiaka aza dia tsy hangatsiaka haingana ao anaty kovetabe fandroana ny maripana mandritra ny fotoana maharitra
Rafitra fandroana fandroana
Raha ny fanaingoana ny noza dia mizara ho rafitra tokana sy rafitra mifangaro ny Jacuzzi amin'ny ankapobeny. Ho an'ny rafitra tokana, misy spray tokana sy jet tokana, ary ho an'ny rafitra mitambatra dia misy fitambaran-tsifotra sy jet.
Ahoana ny fametrahana sy fikojakojana an'i Jacuzzi any ivelany
Mba hialana voly ao an-trano dia maro ny olona misafidy an'i Jacuzzi. Saingy tsy naharitra ela. Na mafy loatra ny moto, na tsy mahery ny famafazana rano, na harafesina sy mitete hatraiza hatraiza ny lavaka famaohana. Ahoana ny fomba haharetan'ny vokatra vaovao? Ho fanampin'ny olana amin'ny kalitao, ny famaritana ny fametrahana sy ny fanadiovana ary ny fikojakojana dia zava-dehibe ihany koa.
1, fanomanana sy fiasana alohan'ny hametrahana
Apetraho amin'ny toerana somary malalaka ny kovetabe fandroana ary zahao raha simba ny velarany. Ny karazana kojakoja rehetra dia tokony hisy, ary ny lavaka famafazana rehetra dia tokony hazava sy hasiana mafy. Ny kalitaon'ny motera dia mifandraika akaiky amin'ny vokatry ny fampiasana ny Jacuzzi any ivelany, noho izany dia tokony hitandrina manokana ny fametrahana azy, ny fandaminana ny fantsona ary ny kalitaony.
2. Tandremo ny tantera-drano
Alohan'ny hahatratrarana ny toerana voatondro, ireo ampahany mora mivoaka dia tsy maintsy tantera-drano amin'ny gel silica. Ampifandraiso ireo ampahany azo ampifandraisina voalohany hialana amin'ny fametrahana tsy manelingelina rehefa apetraka amin'ny toerana voalaza. Ny tantera-drano eo anelanelan'ny ampahany dia tsy maintsy atao tsara, indrindra ny fifandraisana misy eo amin'ny fivoahan'ny rano sy ny fantson-drano môtô dia tena fanalahidy.
3. Toerana raikitra
Apetraho amin'ny toerana voatondro ny Jacuzzi ivelany. Raha ao amin'ny trano fidiovana misy toerana kely izy, dia sorohy ny fironana na ny fifandonana amin'ny vatan'ny varingarina. Atsofohy ao anaty fantsona ny fantsona ary alao antoka ny fandosiran'ny rano. Aorian'ny fametrahana ny varingarina, dia ahitsy tsy tapaka ny visy vatofantsika mba hahatonga ny visy hidina soa aman-tsara mba hiantohana ny haavon'ny ankapobeny.
4. Fifandraisana azo antoka
Aorian'ny fampifandraisana ny plug, dia atao manodidina ny takelaka misy ny herinaratra mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Raha tsy misy tsy fetezana aorian'ny fizahana dia azo ampifandraisina amin'ny toerany ny fantson-drano mangatsiaka sy mafana. Alohan'ny hampifandraisana ny fantson-drano dia mitondrà hery amin'ny fitsapana ny maotera mba hihainoana raha mifanaraka amin'ny fepetra takiana ny feo. Raha tsy izany dia avereno amboarina avy hatrany.
5. Fiasan'ny detection
Aorian'ny fifandraisana, apetraho tanteraka ny Jacuzzi ivelany ary esory indray ny haavony. Alefaso ny rano sy ny herinaratra, zahao ny fiasa rehetra ary hamaha ny olana amin'ny fotoana mety. Ny vokatry ny fitetezana rano amin'ny fandroana dia tokony hojerena amin'ny ankapobeny. Ny tanjaky ny rano, ny feon'ny motera ary raha misy raharaham-bahiny no tena votoatin'ny fanaraha-maso.
6. Fiarovana ny vokatra vita
Arotsaho ny rano ao amin'ny vatan'ny varingarina ary esory ny vongan-drano sisa tavela eo ambanin'ny varingarina ary amin'ny lavaka famafazana mba hisorohana ny harafesina amin'ny lavaka famafazana ny fandroana tsy ho ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra. Rehefa mametraka ny koveta fandroana dia tsy mahavita firavaka hafa ny fianakaviana sasany. Amin'izao fotoana izao, ny installer dia tokony hiaro ny koveta fandroana amin'ny horonantsary hisorohana ny fahasimbana.
2, Fomba fampiasana sy fitazonana ny Jacuzzi any ivelany
1. Azafady mba hadio ny Jacuzzi any ivelany mba hisorohana ny volo sy ny masoandro manakana ny fantson-drano ao anatiny.
2. Aza mampiasa detergents misy alikaola sy asidra mahery ary solvents organika (toy ny alikaola, rano Tianna, amoniaka, acétone, sns.) Hamafa ny haavon'ny Jacuzzi ivelany (ao anatin'izany ny velaran'ny tabila fitambarana, ny faritra plastika, ny ampahany amin'ny aliminioma, ny elektrôlika faritra, famafazana faritra sns). Ampirisihina hampiasa detergent tsy miandany amin'ny fanadiovana Jacuzzi any ivelany.
3. Ny famolahana amina poloney dia afaka mitazona ny tampon-tany hamirapiratra toy ny vaovao.
4. Fikarakarana ireo faritra misy elektrôlôtra ao amin'ny Jacuzzi any ivelany: fafana moramora amin'ny flannelette ny faritra electroplated, aza mamafa amin'ny lamba marokoroko, ary mandrara ny solvent solika.
5. Raha voarangotra na may amin'ny sigara ny tampon'ny Jacuzzi any ivelany dia azonao atao ny manosotra azy amin'ny savony nify sy lamba malefaka.
6. Fikolokoloana ny fandroana any ivelany: rehefa miseho ny refy sy ny tasy eo ambonin'ny vatan'ny varingarina, azonao atao ny mamafa azy amin'ny feta nify amin'ny lamba malefaka.
7. Mandritra ny fanorana hydraulic, dia mitovy amin'ny rendrika amin'ny loharano mafana. Ny olona mahazatra dia tsy hampiasa gel mando sy shampoo ao amin'ny dobo fandroana lohataona. Azo jerena fa ny Jacuzzi any ivelany dia tsy ampiasaina handro, izay tsy mitovy amin'ny Jacuzzi mahazatra.
8. Diovy tsy tapaka ny Jacuzzi any ivelany. Diovy ny fitaovana fanorana hydraulic, fenoy rano mafana 40 ℃ ny kovetabe fandroana any ivelany, ampio detergent amin'ny fatra 2G isaky ny litatra, atombohy mandritra ny 5 minitra ny fanotra hydraulic, ajanony ny paompy ho an'ny fantsona, avy eo fenoy rano mangatsiaka, atombohy ny fanorana hydraulic mandritra ny 3 minitra, atsaharo ny paompy hahazoana rano ary diovy ny koveta fandroana any ivelany.
3, Fanadiovana any ivelany / Jacuzzi
1. Tolo-kevitra ny hampiasa detergent granular izay azo afangaro amin'ny rano hanadiovana ny Jacuzzi any ivelany, ary hialana amin'ny fampiasana detergent ho an'ny tile vita amin'ny keramika na ny enamel. Aza apetraka mandritra ny fotoana maharitra ny kaontenera misy detergent misy rano, ary aza mampiasa spray na concentré na vokatra fanadiovana hafa mitovy amin'izany.
2, azafady aza avela ny poloney amin'ny fantsika, menaka tsy misy rano, mpanadio ranoka maina, acétone, fanesorana loko na solvents hafa hifandray amin'ny akrilika. Ny detergent manimba mijanona eo ambonin'ny akrilika dia hiteraka fahasimbana. Tandremo ny diovina tsara ny velaran'ny akrilika aorian'ny fampiasana azy tsirairay avy, ary aza avela hiditra ao amin'ny rafitry ny fivezivezena ny detergent.
Raha manana fisalasalana ianao ny amin'izay tokony hojerena rehefa mametraka any ivelany / Jacuzzi sy ny fomba fanadiovana sy fitazonana ny Jacuzzi, mino aho fa azo valiana ireo fanontaniana ireo aorian'ny famakiana ny fampidirana etsy ambony.
Teo aloha: 2021China fandroana trano fandroana vita tavoahangy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny akrôna misy zipo
Manaraka: trano fandroana seramika maoderina iray fidiovana roa
Spa fandroana fandroana
Fitaovana fandroana kovetabe fandroana
2021China trano fandroana orinasa mandroboka acrylic simp ...
avo lenta whirlpool acrylic ivelan'ny trano ma ...
2021 orinasa kely fidiovana acrylic tsotra embe ...